RASMI: Lucas Vazquez oo heshiiska u cusbooneysiiyey Kooxdiisa Real Madrid… (Imise sano ayuu ku kordhiyey qandaraaskiisa?) – Gool FM
RASMI: Lucas Vazquez oo heshiiska u cusbooneysiiyey Kooxdiisa Real Madrid… (Imise sano ayuu ku kordhiyey qandaraaskiisa?)
(Madrid) 03 Juun 2021. Lucas Vazquez ayaa heshiiska u kordhiyey kooxdiisa Real Madrid, waxaana uu la sii joogi doonaa kooxda ka dhisan caasimadda Spain, illaa bisha June ee sanadka 2024-ka.
Lucas ayaa kalgacal u muujiyay kooxda iyo taageerayaasha sanadkii hore kaddib markii uu qaab ciyaareed cajiib ah ku soo qaatay daafaca midig, xilli ay la maqnaayeen dhaawacyo Dani Carvajal iyo Alvaro Odriozola.
Nasiib-darrose, xilli ciyaareedka 29-sano jirkaan ayaa soo dhammaaday xilli hore intii lagu jiray kulankii El Clasico, maadaama uu soo gaaray dhaawac culus oo jilibka ah kaddib markii ay isku dheceen ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona, Sergio Busquets.
Si kastaba ha ahaatee, dhaawacaas waxa uu isbeddel ku keenay wadaxaajoodkii u dhexeeyay Lucas iyo Real Madrid, maadaama ay markii hore aad ugu kala fogaayeen wadahadalladooda.
Real Madrid ayaa go’aansatay inay dhagaysato dalabkeeda uu laacibkani ka helayey dibadda, iyadoo Bayern Munich ay u muuqato inay ku dhowdahay inay xaqiijiso saxiixiisa haddii uu go’aansado inuu ka tago caasimadda Spain, waxaa sidoo kale jiray dalabyo kaga yimid dalka Talyaaniga.
Ugu dambeytii labada dhinaca ayaa ka heshiiyey sii joogista ciyaaryahankan ee caasimadda Spain, waxaana uu ogolaaday inuu qandaraaska u kordhiyo Los Blancos, isagoo haatan kooxda sii joogi doona ilaa bisha June ee sanadka 2024-ka.
Lucas ayaa guud ahaan u saftay kooxda koowaad ee Real Madrid 240 kulan, waxaana uu u dhaliyey 26 gool isagoo caawiyey 54 gool oo kale, isagoo kula guuleystay 12 Koob.
DEG DEG: Kooxda Inter Milan oo magacaabatay Macallinkeeda cusub